Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » Ọgbaghara Black Friday na London ka ndị ọkwọ ụgbọ ala Tube dara
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Rail njem • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Ndị ọkwọ ụgbọ oloko London Underground jikọrọ ọnụ gbara nnukwu ọrụ na Black Friday, na-ekwu na ọ bụ “ịdọka nkwekọrịta dị adị na nhazi ọrụ tupu ịmalitegharị Night Tube.”
Okporo ụzọ na isi ise London Ahịrị Tube - Central, Jubilee, Northern, Piccadilly na Victoria - emetụtala ọrụ achikọtara ọnụ taa, ebe a na-atụ anya ọgba aghara na usoro njem ụgbọ njem nke isi obodo Britain na ngwụcha izu.
Dịka ndị otu Rail Maritime na Transport Union (RMT) siri kwuo, bụ ndị butere iku ọrụ a, ọtụtụ ndị otu ya enweghị afọ ojuju maka usoro ngbanwe ọhụrụ a.
Transportgbọ njem maka London (TfL), otu ọha na eze na-ahụ maka ụgbọ njem ọha na eze obodo ahụ, kwupụtara mmechuihu ya maka mkpebi RMT. Na nkwupụta, TfL kwuru na a kpọbatara ndị ọkwọ ụgbọ ala Tube ọhụrụ ahụ n'August ma tinye ọtụtụ mmesi obi ike nye ndị ọrụ gbasara nchekwa ọrụ.
Ọpụpụ ahụ kwụsịrị ọrụ n'ofe London na Black Friday, otu n'ime ụbọchị ịzụ ahịa kacha arụ ọrụ n'afọ, na-ere ahịa n'ọtụtụ ụlọ ahịa. A hụla ụfọdụ n'ime ndị sonyere ya na ya ka ha na-ahọpụta n'ọdụ ụgbọ mmiri ndị nwere ọkọlọtọ na ọkọlọtọ.
LondonOnye isi obodo kwukwara okwu megide mkpagharị ahụ. Sadiq Khan kwuru na Twitter, "Mmempụ iku ume a na-adịghị mkpa nke RMT na-akpata ọgba aghara zuru ebe niile maka ọtụtụ nde ndị London na ọ ga-adakwa n'ahịa ahịa, omenala na ile ọbịa nke London n'oge kacha njọ."
Akwụsị ọrụ a ga-aga n'ihu na Satọde, na-eme atụmatụ ịpụpụ ọzọ maka oge ekeresimesi.
“Ndị ahịa chọrọ iji TfL A dụrụ ndị ọrụ ọdụ ka ha lelee tupu ha eme njem, nyekwuo oge maka njem ha, na njem n'oge dị jụụ ebe enwere ike, "TfL kwuru, na-agbakwụnye na ndị mmadụ nọ na Central. London na-adụ ọdụ ka "ịga ije, okirikiri ma ọ bụ jiri e-skuuta mgbazinye" kama iji tube.